Efa mampitaraina ny mponina amin'ireo fokontany manodidina moa ny fanapoahana afomanga ataon'io trano fandraisana lanonana io raha ny fanazavan'ny sefo fokontany. Efa tsy fahafinaretana intsony no azo fa fitaintainana.
Efa tonga teny an-toerana nijery ny zava-nisy ireo mpitandro ny filaminana na dia somary tara aza ny fahatongavany noho ny halaviran'ny toerana. Efa nentina any amin'ny hopitaly ihany koa ireo naratra. Tafaporitsaka avokoa moa ireo jiolahy.